IZIQITHI EZINGAMA-37 EZINKULU ZEKHITSHI EZINOKUHLALA (IMIFANEKISO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iziqithi ezingama-37 ezinkulu zeKhitshi ezinokuhlala (Imifanekiso)
Iziqithi ezingama-37 ezinkulu zeKhitshi ezinokuhlala (Imifanekiso)
Le galari inamaqithi amakhulu ekhitshi anezihlalo. Isiqithi sokutya ekhitshini yindlela entle yokusondeza usapho kunye ngamaxesha okutya kunye nokubonelela ngendawo emangalisayo yeendwendwe.
Iziqithi zasekhitshini ziza ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngemivalo yesidlo sakusasa ene-top top, okanye isiqithi esine-counter overhang ukulungiselela izidlo. Ziza zineentlobo ngeentlobo zeemilo kunye nobungakanani obuvela kugoso, uyilo lwesangqa esime ngxi, iimilo zesiko, isikwere okanye uyilo loxande. Apha ngezantsi kukho amakhitshi amahle aneziqithi ezikhulu ngokwaneleyo ukubonelela ngendawo yokuhlala nokutya-ekutyeni.
Kumfanekiso ongentla ukusebenzisa ngobumnandi i-Bianco Carrara marble inokubonwa kwisiqithi sakusasa-nakwisiqithi sasekhitshini phezulu kunye nasemva kokutshiza. Uhlobo lwendabuko lwekhitshi lubonwa nakwisitayile esihle sehood hood, enamatye e-cladding kunye nokukhanya kwesitayile. Izitulo zokubala kunye nesiseko sesidlo sakusasa se-bar-Island sisebenzisa i-mahogany etyebileyo enika ukufudumala kwindawo. Unyango lweenkuni lunokubonwa nakwimiqadi evulekileyo yesilingi kunye nakwiibhodi zomgangatho weplanga.
Uyilo lweSiqithi seKhitshi nesihlalo
Isiqithi seKhitshi nesihlalo seNye
Isiqithi esikhulu seKhitshi nesihlalo seBini
Isiqithi sekhitshi esinebhodi yebhodi yebhodi kunye nomgangatho omhlophe wokubala
Ikhitshi elinesiqithi kunye usingasiqithi
Isiqithi seKhitshi esinezihlalo ezithathu
Isiqithi sokubala esimhlophe esimhlophe esinendawo yokuhlala izidlo ezintathu
Isiqithi sethutyana sasekhitshini kunye nekhabhathi emhlophe kunye negranite emhlophe
Isiqithi semarble esimhlophe sekhitshi esinezihlalo ezimhlophe zesikhumba
Isiqithi sasekhitshini esingenasici esinamacala amdaka
Isiqithi esimnyama esimnyama sekhitshi esinee-countertop ezingwevu
Isiqithi sekhitshi iMeditera esinegranite emdaka
Isiqithi esimnyama namhlophe esimhlophe esinezihlalo ezilukiweyo zebar
Isiqithi sekhitshi yesiqhelo esineekhabhathi emnyama kunye necomputer
Iziqithi zeKhitshi ezinezihlalo ezine
Isiqithi sasekhitshini esingenasici esingenasici esinesihlalo esine-chrome yangasemva
Isiqithi sebha yesidlo sakusasa kunye ne-countertop yeenkuni kunye ne-Aro bar stools
I-quartz emhlophe ekhitshini yesiqithi esinokuphakama kwesitulo sebha
Isiqithi sekhitshi yanamhlanje esinebha yesidlo sakusasa
Isiqithi esikhulu samanqanaba amabini asekhitshini anezitulo zebar yeFeliksi
Isiqithi sanamhlanje sekhitshi esinendawo emhlophe yemabhile kunye nesihlalo sehlalo
Isiqithi sekhitshi esijikeleziweyo esinokuhlala izidlo ezine
Isiqithi sekhitshi elinemijikelezo enezinto zokubala ze-granite ze-beige
Isiqithi sebha yesidlo sakusasa ende kunye nezitulo zebar zaseTibetan
Isiqithi semarble semarble faux emhlophe enezitulo zebar chrome ezinezihlalo ezimnyama zesikhumba
Isiqithi sanamhlanje esincinci sekhitshi esinendawo yokuhlala iinkuni
Isiqithi sekhitshi ye-eclectic enoyilo olugobileyo
Isiqithi sanamhlanje sekhitshi esine-laminate counter counter
Iziqithi zeKhitshi ezinokuhlala ezintlanu okanye nangaphezulu
Isiqithi sasekhitshini esixande esinendawo yokuhlala izidlo ezithandathu
Isiqithi esimnyama semarble ekhitshini esinendawo yokuhlala
Ingcibi yekhitshi kwisiqithi esinezitulo zebar zangoku eziphakanyisiweyo
Isiqithi sekhitshi se-eclectic esinekhawuntara emhlophe emhlophe kunye nezihlalo ezintlanu
Isiqithi esihle sendalo yasekhitshini enezitulo zebala yesikhumba ezingenamqolo
Isiqithi sekhitshi esinendawo yokuhlala eyakhiwe ebhentshini
Isiqithi sangoku sekhitshi esinombala okhanyayo wegranite
Isiqithi sekhitshi iMeditera esinendawo emhlophe emhlophe
Isiqithi sekhitshi yanamhlanje esinee-counter eziqinileyo zomthi
Isiqithi sasekhitshi esiluhlaza esinendawo yokuhlala
Isiqithi esimhlophe sequartz esimhlophe nekhabhathi emnyama
Iziqithi zeKhitshi zinokufika ngokufanelekileyo kwiindawo ezivulekileyo zendawo. Kodwa inkqubo yoyilo lokuhlala esiqithini inokuba yinkqubo eyoyikisayo ukuba awuyazi inyathelo elifanelekileyo. Ubunyani bokuthatha isigqibo kwizinto eziyimfuneko kufuna ulwazi kwaye inqaku liya kuqinisekisa ukuba likushiyele kunye nokuqonda kweendawo zokuhlala kwesiqithi.
ohlawula imisesane yomtshato
Njengomthetho wesithupha, ukuhlalutya ubeko lwendawo yekhitshi kubalulekile. Oku kukhokelela ekubeni ucingisise ngobungakanani babathengi kunye nexesha lokusetyenziswa eliqikelelweyo kunye neepateni zabo zokujikeleza. Oku, ukubuyisela kukunceda ukuba uqonde ukwenza owona mfanekiso mkhulu ekufikeni kwesigqibo malunga.
Nangona kunjalo, ukucinga iminyaka embalwa ngaphambi kwexesha kuya kunceda ukugcina uyilo kwangaphambili. Njengoko uMbutho weSizwe weKhitshi kunye neBhafu uthumela isithuba se-36 ″ kufuneka sishiywe kuwo onke amacala esiqithi sekhitshi. Ukuhlala kuya kufuna indawo engakumbi kunye nendawo yokuhlala neyokuhamba.
Indawo yokuhlala ekhitshini yesiqithi iyahluka ngokobeko. Umzekelo, ukuhlala ecaleni okanye kwelinye icala kuqhelekile. Ukuhlala kwisiqithi seKhitshi kunokuhanjiswa kumacala amathathu kwiziqithi ezikhulu. Iiphelo ezimfutshane zisetyenziselwa ukwaba indawo enesiphelo eside. Ngamanye amaxesha, njengesicwangciso sokugcina indawo yokuhlala kwesiqithi sinokutshintshelwa kwikona ekhitshini.
Indawo yokuhlala eKhitshi Island nayo iyahluka ngobude. Ukuphakama kwebha, ukuphakama kwekhawuntari kunye nokuphakama kwetafile yimizekelo embalwa. Izinketho zoyilo zihlala zisetyenziselwa ukuqaphela ukusebenza.
Umzekelo, isiqithi esinezigaba ezibini ezinesidlo sakusasa esiphezulu sebar counter top sibonelela ngeendlela zokutya ngaphakathi okanye indawo yokusebenzela yokulungiselela ukutya ngokubanzi yeendawo eziphakamileyo ezahlukeneyo. Ukwamkela indawo ephezulu yetafile kunokuba yinto efanelekileyo yokuhlala kunye nezitulo, nangona kunjalo ithathwa njengephantsi kakhulu kumpheki omde ukulungiselela ukutya ngokufanelekileyo.
Ukuhlala kwahlulwe ngeendlela ezimbini ekunokukhethwa kuzo nokuba zizitulo okanye izitulo. Izitulo zinokuba licebo elihle lokugcina indawo ngelixa izitulo zisebenza ngokusebenza.
Isiqithi esikhulu sekhitshi esinezihlalo akufuneki sisebenze kuphela ngenjongo yaso yokusebenza, kodwa sinokusebenza kunye njengesixhobo sokuhombisa ngokunjalo.
Upholstery esetyenziselwa izitulo kunye nezihlalo zinokongeza iziqholo zobume bengaphakathi. Iskimu sombala kunye nokuthungwa kwezinto zokuphakamisa kufuneka zibe yinkxalabo yokuhlangana kunye nelaphu lonke ngaphakathi. Izinto ezisetyenziselwa ukwakha izitulo okanye izitulo zinelizwi lazo xa libekwe ngaphakathi.
Elinye inqaku elibalulekileyo xa ujonga iziqithi zasekhitshini ezinendawo yokuhlala ibha kukudibana okungcono kombala kunye nezinto zokuhlala. Cinga ukuba ngaba ukhetha ukuba nezihlalo zokubuyela emva kusapho lwakho. Rhoqo iindwendwe ezininzi zikhetha izitulo ezilungeleyo kunye nokuchitha indawo okuncinci okwakhiwe ngezinto ezenziwe ngomthi okanye ngentsimbi.
Kuhlala kubalulekile ukuba uchonge ukuba uyayifuna kwaye uyayiqonda i-vibe efunwa sisithuba, ukuze kube lula umhlaba ukukhetha indawo yokuhlala kukhetho lwakho.
Isiqithi sekhitshi esinendawo yokuhlala enye silungile kwabo bafuna ukufaka uncedo kumpheki osisidima okanye baxhomeke kunye nezinye zakho ezibalulekileyo ngelixa uphekayo.
Ngelixa inyawo lale khitshi lokutyeba likhulu isiqithi esikhulu sibonelela ngendawo yokuhlala kakuhle.
Isiqithi esiphikisayo seMeridian grey Quartz sisebenzisa ngokufanelekileyo isitulo se-chrome kunye nezibane zangoku ezixhonywe ngentla kwayo ngokugxininisa imbonakalo yanamhlanje yoyilo lwekhitshi. Ipateni yokuthayipha kwe-herringbone yethayile engwevu nengwevu emhlophe yindlela yoyilo yokugxininisa eludongeni lwangasemva. Ukusetyenziswa kwekhabhathi yomthi omnyama kuyaphikisana neethayile zetena ze-porcelain ezisetyenzisiweyo.
Iziqithi zasekhitshini ezinkulu ezinje ngezi zihlala zinika iikhitshi ezimile okwe-U ukubonelela ngendawo efanelekileyo yokufikeleleka naphina kwigumbi. I-Bianco Catalina granite esetyenziselwa isiqithi sekhitshi ine-high-end elegance ephezulu ehamba kakuhle kakhulu kunye nezinye izinto zoyilo kwigumbi. Ukukhethwa kwesibane esimhlophe esifudumeleyo phantsi kweshelufu, i-porcelain back splash tiles, kunye nezibane zependant zezibane zoyilo ezikrelekrele ezihambelana nekhabhathi ezimhlophe ezigungqayo egumbini.
Uyilo oluhle lwekhitshi lubonisa isiqithi esinamagumbi amabini okutya ecaleni kunye nepeninsula ende ukulungiselela iindwendwe ezongezelelweyo. Indawo yokutyela engaqhelekanga ngokukhanya okuninzi kwendalo yenza indawo yokumema ikofu yakusasa okanye isidlo sakusasa.
Leli khitshi lokunethezeka lisebenzisa ikhabethe yomthi eqingqiweyo kunye neziqithi zasekhitshini, iisilingi eziphezulu, iiseli zeglasi, kunye nezixhobo zokubala zePental Kozmus satin ukunika igumbi igumbi lokuziva liphezulu. Umgangatho ogqityiweyo weplanga usebenza emhlabeni abamhlophe kunye neetani zekhabinethi ekhitshini eyenziwe ngamaplanga, ngelixa ukugqitywa okumdaka okumnyama kwebar yesidlo sakusasa kuyithelekisa ngokupheleleyo.
Nantsi igalari yethu yeziqithi zasekhitshini kunye nokutya kwindawo yokutyela yeendwendwe ezintathu.
I-mosaic tile ende emva kokutshiza kolu luyilo lwasekhitshini lweNeo-luhamba kakuhle kakhulu kunye neBlizzard granite esetyenziswe kwikhawuntara yasekhitshini nakwindawo yokulwa isidlo sakusasa kwibar yesiqithi. Iikhabhathi ezimhlophe ezihonjiswe ngamaplanga nezithsaba ezibonakala ngathi ziyahambelana nezitayile ezibukhali zezibane ezijingayo zekhitshi, iindawo ezingenazintsimbi zekhitshi, kunye nembonakalo yanamhlanje kunye nokuxhonywa kwezitulo zebar zasekuseni. Lo ngumzekelo olungileyo wale mihla kunye nemveli oxutywe kunye.
Imilinganiselo yesikwere yale khitshi ingwevu inika eli gumbi imeko entle kunye nokwamkela. Isiqithi sebha yesidlo sakusasa sisebenzisa umphezulu woMlambo oMhlophe ohamba kakuhle ngetayile enepateni emva kokutshiza okusetyenziselwa izixhobo zokubala zasekhitshini. Iithayile ze-porcelain ezingwevu zomgangatho zincedisa unyango lwepeyinti engwevu yeendonga nophahla. Ukukhanya okwaneleyo kubonelelwa ngeefestile ezixhonywe ngazinye, izibane zesikhanyiso sangoku, kunye nezibane ezahlukeneyo zepini eluphahleni. Isitulo sebar Rasmussen kunye nomqamelo ikwayinto ekhethiweyo yefenitshala kwesi sithuba.
Ikhabhathi emhlophe yekhitshi icinywa yimibala eyahlukeneyo engwevu kumqolo ongasemva, i-stainless steel finishes yezixhobo zasekhitshini, kunye nokutshiza okumdaka ofudumeleyo kwiibhodi zomthi we-oki. Indawo yokuhlala emhlophe yesikhumba esitulweni ihamba kakuhle kunye neCalacatta Carrara yemarble ephezulu kwisiqithi sasekhitshini. Izibane zeglasi ezijikelezayo zongeza ubumdaka kuyilo olupheleleyo lwendawo.
Ipateni yomgangatho ocacileyo unoyilo olwahlukileyo olubandakanya iskimu sombala omnyama nomhlophe ukuvumela ngokwenene umbala obomvu wekhabhinethi kunye ne-stainless steel-top counter counter. Ikhabhathi e-shaker kwikhitshi ipeyintwe ngombala omhlophe oshushu. Eminye iipopu zemibala zinokubonwa- iiblues zezibane ezijingayo ezintle kunye neziqhushumbisi zesitulo sebartan zihlangana kakuhle kunye nobomvu wesiqithi somthi.
Le khitshi ngumdibaniso wekhaya elinomtsalane kunye nopholile kunye nesitayile esivelisiweyo seshishini. Iimbiza kunye neepani zokuxhoma iintonga zikwaxhasa isikali sokulinganisa-sisebenza ngokulinganisela iresiphi yasekhitshini. Ishelfu evulekileyo yayikukhetho loyilo olunesibindi kodwa lwalwenziwe kakuhle. Indawo yokuphamba emarmore emhlophe engaphezulu kwesi siqithi sekhitshi ihamba kakuhle ngesiseko somthi esimdaka ngombala kunye nendawo yokuhlala yesitulo esimdaka ngebala.
Iikhitshi zaseMeditera zihlala zisebenzisa iifestile eziphakamileyo zokucoca ezinje ngezi ukuba zikhanyise kwaye zisebenze njengoyilo lwetrophic olulawula ukujikeleza komoya kunye nentuthuzelo yokufudumeza. Iithayile zomgangatho wemarble ezipholileyo, izixhobo zokubala ezinamabala amdaka ngebala, kunye nemibala eyahlukeneyo emdaka kwikhabhathi yamaplanga kunye neeshelufa zonke zinika umbono wendlela yodidi oluphezulu kwigumbi. Isiqithi se-butcher block sisebenzisa i-top top counter kunye nezindlu zekhitshi lesibini. Ekupheleni kwegumbi, sinendawo yokutyela enendawo enesilingi esezantsi kunye nekhandlela lesinyithi eshushu esimhlophe.
Umphezulu wejet omnyama opheke phezulu esiqithini sekhitshi kolu luyilo luhambelana ngokugqibeleleyo nesiseko saso esimhlophe esenziwe ngephepha kunye nekhabhathi. Indawo yokuhlala ephothiweyo kunye neplanga yokhuni nazo zisebenzisa imibala emnyama emdaka ejonga umphezulu wekhawuntara. Iithayile zeTravertine zihombisa eyona ndawo iphambili kwaye zisebenza njengoyilo lwangasemva lwe-rustic oluhamba kakuhle neetani ezikhanyayo zeendonga. Ukusetyenziswa kweflora ngohlobo lwezityalo ezisendlini kuyanceda ukugcina eli gumbi liziva liphila kwaye lihlaziyekile.
Ubume obukhethekileyo besi siqithi kolu luyilo buya banzi ekugqibeleni ukunika indawo engaphezulu. Oku kwenzelwa ukuba isebenze njengendawo efanelekileyo yokutyela isidlo sakusasa. Izitulo zokubaleka zaseVienna zinombala omnyama osisityebi ofana nokugqitywa kwikhabhathi yesiqithi sekhitshi kunye negranite emnyama esetyenziswe njengendawo yokulwa. Indawo eseleyo isebenzisa imibala yokukhanya ekhanyayo. Oku kunokubonwa kwiithayile zelitye lekalika, kwikhabhathi yekhitshi, nakwisilingi emhlophe yekhitshi.
Nantsi imifanekiso yethu yoyilo lwekhitshi kunye neziqithi ezihlala ezine.
Isiqithi esiphikisayo sentsimbi esingenakususwa esinamavili sinika eli khitshi ubugcisa bale mihla, beshishini, obuhle kwaye buseta ithoni yezinye izinto zoyilo lwendawo. Izitulo zebha ezingenamqolo, uluhlu kunye nefriji, kunye neeshelfu zokugcina zonke zabelana ngesinyithi kunye nokugqitywa kwe-chrome. Ukusetyenziswa ngobuqhetseba kwemarble emhlophe emva kokutshiza kunye nokukhanya okukhanyayo kwitreyini yomthi kongeza umnxeba omnandi.
Isiqithi esisembindini wekhitshi sinomphezulu owenziwe ngombala omnyama omnyama kwaye ugxininiswa ziipopu eziluhlaza ukusuka kwinkulungwane yekhulu leminyaka yezibane ezikhanyayo eziphezu kwazo. Ikhabhathi emhlophe, iindonga, kunye nophahla ziyancediswa yimfudumalo yeenkuni ze-cherry flooring, i-top top counter ye-bar yesidlo sakusasa, kunye ne-brown brown upholstery yezihlalo ze-Aro.
Isiqithi sokulwa seQuartz sisiqwenga sokuyilwa kwekhitshi. Iikhabhathi ezimhlophe, iindonga ezipeyintiweyo, kunye nokubumba konke kuhambelana nombala wesiqithi. Kukho ukutshiza kweenkuni ezimdaka kunye neetsimbi zentsimbi ezibonwayo kulungelelwaniso lokuphakama kwesitulo sebar, izixhobo zasekhitshini kunye nezixhobo, kunye nezibane zeglasi ezihonjisiweyo.
Leli khitshi langoku lisebenzisa ukusetyenziswa okuluhlaza kwemibala emnyama emnyama kwibhabhinethi, kumacala omacala, kunye nakwiiplanga ezibonakalayo. Ibha yesidlo sakusasa egosogoso isebenza njengolwandiso lwekhitshi, kunye nendawo yayo esele ikho ngokwaneleyo enikezelwa sisiqithi esiphakathi sekhitshi. I-granite ecekeceke ethe kratya kwiincopho zokubala iyabonakala kwaye izisa ikhitshi ebomini. Izitulo zokubamba iinkuni kukuchukumisa okuhle kwindawo.
Iziqithi ezinkulu zekhitshi ezinendawo yokuhlala kufuneka zibonelele ngendawo yokutya eyokutya. Izitulo zebar zikaFeliks eziboniswe kulo mfanekiso zintle, ukhetho lwefenitshala yanamhlanje oluhamba kakuhle nembonakalo yomhla omncinci wekhawuntara yesiqithi semarble. Iikhabhathi ezimhlophe ezinokuhomba okuphezulu zizinto ezikhethiweyo zoyilo oluhamba ngokugqwesileyo ngokukhanya kwesikhanyiso sekhampani. Imibala ekhanyayo ikwanokulinganiswa ziithayile zomgangatho omnyama we-porcelain kunye neelaminates zomthi ezimnyama kwikhawuntara yasekhitshini.
Olu luyilo lwanamhlanje lwe-minimalist lulula kodwa lunesibindi, aluhombiswanga kodwa luyamangalisa. Isiqithi esikumgangatho wemarble sinezihlalo ezihleliweyo phantsi kwaso kwaye sisebenzisa uyilo lwecantilever olwenza ngokwenyani umoya wesitayile sanamhlanje ekhitshini. Obu buhle bukwabonwa kuyilo lwayo, uluhlu lokubala, kunye nekhabhathi yolawulo. Ukusetyenziswa ngobumhlophe kwabamhlophe, bumdaka ngebala, kunye neetani, kwenza uluhlu lweempawu zokuyila ezenza ukuba esi sithuba sive sodwa.
Isiqithi esinegophe sale khitshi sihamba kakuhle nobeko lwekhitshi emile njengo-L. Kuthatha ithuba lekona kwaye kuvule indawo yesidlo sakusasa kwigumbi lonke. I-Calacatta Michelangelo yemarble ephekiweyo yesiqithi sasekhitshini ikwanika ubuhle obumenyezelayo obuhambelana nezitayile zesiko lekhabhathi emhlophe yekhitshi, ukufudumala kwemigangatho ye-oki emnyama, kunye nembonakalo entle kodwa yeediliya yezibane ezijingayo.
Sebenzisa iziqithi ezinesetyhula njengenye indlela yokubonelela ngendawo yokuhlala eyaneleyo ngokwandisa umjikelezo wesiqithi sekhitshi. I-Barricato granite esetyenziswe njenge-counter top kukuchukumisa okuhle. Isicwangciso somgangatho ovulekileyo esidibanisa indawo yekhitshi kunye negumbi lokuhlala lahlulwe ngobude obuphakamileyo besilingi, nangona unyango lomgangatho weeplanga zebhodi yomthi ziqhubeka. Izitulo zebar ezenziwe ngomthi, ipaneli emhlophe yekhabhathi, kunye ne-Gothic-industrial chandelier zonke zizinto ezintle zoyilo lwendawo.
Ikhitshi elimnyama lekhitshi linendawo yokutya kwasekuseni esebenzisa ibala elihle leBlanco Tulum. Izitulo zebar yaseTibet ezisetyenziselwa ibha yesidlo sakusasa nazo zilula kodwa zikhetha ukhetho lwefanitshala. Umgangatho owenziwe ngombala we-porcelain we-tile uhamba ngokumangalisayo kunye ne-Gothic ironworks ye-chandelier yasekhitshini kunye nezibane ezihonjisiweyo.
Eli khitshi linobugcisa beli xesha linesiqithi esineemabhile esinezihlalo ezihlengahlengisiweyo ezijikelezayo, itepu enekhitshi elinemixholo emininzi, izibane zependant ezenziwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kunye neebhodi zomgangatho weenkuni. Kwaye kunjalo kwindawo yesiqithi sekhitshi. Sinepeyinti engaqondakaliyo exhonywe kwindawo yokuphekela ekhitshini kunye nefenitshala yanamhlanje kunye nezinto zokuhombisa kwigumbi lokuhlala elikufutshane nakwigumbi lokutyela.
Iikhitshi zanamhlanje ezincinci njengale zihlala zisebenzisa indawo ethe tyaba, engenakuphazanyiswa ukwenza ukubukeka okuthe tye kwaye okuhle. Indawo yokutyela isidlo sakusasa kunye nesiqithi sase khitshini ziye zangumgubo kunye nekhabhathi emhlophe ethe tyaba kunye neziseko. Izitulo zokulwa iEurostar Riley zabelana ngobuhle obufanayo banamhlanje kunye nobuhle. Inkangeleko ende, ephindaphindwayo yokujonga iikhabhathi zasekhitshini zinobunkunkqele kwaye zinesibindi. Ngokubanzi, lo ngumzekelo ogqibeleleyo wobuncinci ngokugqibeleleyo.
Le khitshi enomtsalane ineendlela ezahlukeneyo zoyilo, ezibonwayo kwiglasi yokutya kwasekuseni egobileyo, ibhedi yesiko, ukukhanya kwezibane zeglasi, kunye nethayile ende yokubuyela umva. Indawo emhlophe eqinileyo embindini wesiqithi yahluke kakuhle kunye nemibala etyebileyo emdaka yehlathi elisetyenziswa kwikhabhathi nakwicala lokuphikisa. Konke kuko konke, iindidi zokhetho zoyilo zidibanisa kakuhle kwaye zivelisa uyilo oluyingqayizivele kunye noluyilo lwekhitshi.
Isiqithi sanamhlanje sekhitshi sinomphezulu ocwebezelayo we-laminate okhupha ukukhanya kwegumbi. Sineenkozo zeenkuni ze-vinyl zangaphantsi, izinto ezinomdla kwitayile emhlophe ye-porcelain emva kodonga, kunye nomatshini ocinezelwe ngomthi kwi-khabinethi esekhitshini ngasekunene, ungasathethi ke ngokukhanyisa ityhubhu kwisiqithi sekhitshi. Konke kuko konke, umahluko omkhulu weqhekeza loyilo kwesi sithuba uyenza ibonakale.
Ukuba uyathanda ukonwabisa okanye unosapho olukhulu oluthanda ukubuthana ekhitshini olunye loyilo olungezantsi lukufanele. Zonke iikhitshi zineziqithi ezinokuhlala ezintlanu okanye nangaphezulu.
Isiqithi eside solu luyilo lwasekhitshini lwesiko sisebenzisa indawo enkulu yomgangatho. Ukusetyenziswa kwendawo kunika indawo eyaneleyo kwisiqithi sekhitshi kwaye kunokuhlala abantu abaninzi. Izitulo zebar, nangona zikhohlisa ngobuqili kunye nesiko kwisitayile, eneneni zisebenza njengezitulo ezijikelezayo. I-basket-esque vibe engendawo yezibane ezihonjisiweyo kunye nokusetyenziswa okuqaqambileyo kwamalungiselelo eentyatyambo kugcina eli gumbi liziva lisekhaya kwaye lamkelekile.
Isiqithi sokumelana ne-marble esinegrey e-Athene kunye ne-marble back splash zisebenza njengendawo yokugqamisa enkulu ngokungafaniyo nekhabhathi emhlophe kunye neendonga zale ndawo yekhitshi. Iipateni ezinomda othe tyaba ezindongeni lukhetho olukhethekileyo kodwa lusebenza kakuhle kweli gumbi. Amagqabantshintshi eplanga kwindawo yoluhlu kunye nemilenze yesiqithi sekhitshi zikwachukumisa kamnandi ukufudumala; oku kuyancediswa ngakumbi ngumgangatho weenkuni ogangathiweyo. Ukuchukumisa ubugcisa bemizi-mveliso kunokubonwa kwibhokisi yeglasi yeebhokisi ezihonjisiweyo kunye nezihlalo zentsimbi zasekhitshini.
Ngesitayile sebhentshi esingaphezulu kokuhlala ekhitshini kunegumbi elininzi lokutya ekutyeni, okanye nakwindawo yabantwana okanye abakwishumi elivisayo yokwenza umsebenzi wasekhaya kwikhawuntara yasekhitshini. Isiqithi esimile njengo-L sale khitshi lezinto zobugcisa sisebenzisa izihlalo zangoku zebar enezinto ezixhasa umgangatho weTerra Cotta. Olu luhlu lwe-rustic luqhubela phambili olwenziwe yimigangatho yeplanga ecekeceke kakhulu, iingcango zekhabinethi ezityebileyo, kunye nomphezulu weemabhile. Ukongeza kwisiqithi esimile njengo-L, le khitshi ikwanesiqithi esiphakathi esihlala isinki yekhitshi.
Le khitshi ye-eclectic isebenzisa uluhlu olubanzi lwezinto zoyilo ukuhambisa umoya ophilileyo kodwa opholileyo. Inye kuphela into etsala umdla wakho kuya kufuneka ibe sisibane sokuxhoma se-rustic kunye nesamashishini esinee-bulbs ezininzi ezifudumeleyo ezimhlophe ezixhonywe kwisiqwenga somthi wevarnished. Kwenye indawo, sinomtsalane ochukumisayo wesiqithi esineemabula, i-chrome kunye nezihlalo zebar zokhuni, i-mosaic tile back splash, kunye ne-tan ceramic flooring. Ikhabhathi yokhuni ikwonyusa ukuziva kwesithuba.
Uyilo oluhle lwasekhitshini oluqhelekileyo lusebenzisa isiqithi esikhulu esinexande ukubonelela ngendawo yokubala eyongezelelweyo kunye nokusebenza njengebhari yesidlo sakusasa. Ipeyinti emhlophe kwikhabhathi, kwiindonga, nakwisilingi evulekileyo yomgangatho zizalisa izityebi ezimdaka ngebala zekhitshi lesiqithi, iibhodi zomgangatho wamahogany kunye netafile yokutyela. Izitulo zokubala zesikhumba ezingenamqolo kunye nezitulo zokutyela ezinesitayile zizinto ezikhethiweyo zefanitshala yegumbi. Njengomphetho wokugqiba, isibane seglasi kunye nezibane ezijingayo zinika igumbi ubuhle kunye nepanache.
Isiqithi esisembindini kolu luyilo lwekhitshi sinebhentshi yokuhlala eyakhelweyo. Lo ngumzekelo owahlukileyo apho endaweni yokusebenza njengetafile yendawo yokutyela isidlo sakusasa, isiqithi sasekhitshini sisebenza njengendawo yokuhlala. Ngokuhambelana kwemibala, iikhabhathi ezimhlophe zeplati emhlophe yendawo yekhitshi yoyilo yahlukile kokugqitywa okumnyama okumnyama kwikhabhathi yesiqithi esikhulu sekhitshi kunye neebhodi zeplanga. Ukhetho lwesipili esibonakalisayo emva kokutshiza kunye neglobhu yeglasi exhonywe ngekhandlela zizinto ezintle zokuchukumisa zesitayile sanamhlanje ezizisa ubomi kwindawo.
Esi siqithi sekhitshi sanamhlanje esinendawo yokuhlala sithatha indawo yokujonga okuhle kunye neefestile zeglasi ezigcweleyo ezivumela ukukhanya kwelanga. Ikhitshi ngokwalo linesiqithi esikhulu esinendawo yokukhanya enamachokoza egreyite kunye nezihlalo ezinesitayile sangoku. Ukusetyenziswa kwezityalo ezisendlwini kunye nezitulo zetafile zokutyela kukwangumbane.
Enye ikhitshi entle yohlobo lweMeditera, izitena ezenziwe ngamatye ezinqabileyo zinokubonwa kwiifestile kunye nakwizakhelo nakumlomo ongezantsi webala. Oku kuhambelana nomgangatho wethayile wamatye ekhitshini. Ikhawuntara emarmore emhlophe nengwevu kunye nemiqadi yeplanga emnyama ebonakalisiweyo eluphahleni inceda ukunika igumbi i-rustic kunye ne-home vibe. Kwakhona okubonwe apha yindlela yoyilo yokugcina iimbiza kunye neepani- uhlobo lokuxhoma lweentlobo luxhonyiwe ngaphezulu kwesiqithi sasekhitshini eside.
iingoma zomtshato wehip hop ezilungileyo
Iikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe, udonga, ukubunjwa kwesithsaba, kunye nophahla lweli khitshi zahluke kamnandi yimizila efudumeleyo emdaka ebonwa kwiikhabhathi, kwisiseko sesiqithi, nakwimigangatho yeenkuni emnyama. Indawo yokuhlala i-Stacker bar isitulo lukhetho lwangoku kunye nematshisi kunye nenqaku eliqinileyo leplanga leebhari kwisidlo sakusasa.
Leli khitshi elihle elinesiqithi esiluhlaza kunye neendawo zokuhlala zinika indawo eninzi yokutya-ekudleni ukusuka kwi-countertop yayo enkulu ye-quartz. Iikhabhathi ezimhlophe, ukukhanya kwe-tile eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomgangatho okhanyayo womthi kunceda ukugcina uyilo lukhanya kwaye likhanya.
Kongezwe ezinye izitulo zebar ezimbalwa kwesi siqithi sikhulu sineendawo ezininzi zokuhlala iidiners ezongezelelweyo. Ikhawuntara emhlophe yequartz yesiqithi sekhitshi ikhanyiswe zizibane ezixhonyiweyo ezixhonywe kwingoma. Oku kwenza ukuba zihanjiswe ngokokhetho lomsebenzisi. Ithayile yendalo yelitye lesitayile ebuyela umva inika okwahlukileyo kunyango olubonakalayo lweendonga kwaye yaphula ibhloko umbala ongwevu wazo zonke ezinye iindonga ezipeyintiweyo. Iikhabhathi ezimnyama zekhitshi nazo zihamba kakuhle ngethoni emhlophe ngokubanzi yegumbi.
Uyilo lweGreen Kitchen Design Igalari onokuyithanda:
143 Uyilo lweKhitshi eNtofontofo - Amakhitshi amahle aneziqithi - Amakhitshi aneebhari zesidlo sakusasa - Isikhokelo soYilo lweKhitshi - Iingcamango ezingama-77 zeSiqithi seKhitshi
Ukulungisa iinwele emtshatweni
izixhobo zokubala ezibomvu
izimvo zomlambo wedwala lomlambo
I-navy blue plus ilokhwe yomtshakazi ilokhwe